Yekutengesa Beer Brewing Midziyo
Kwakanaka abrasion kuramba zvinhu
Mukati-Bhachi (SUS304) ukobvu: 3.0mm
External-bhachi ukobvu: 2.0mm
Chisimbiso musoro ukobvu: 3.0mm
zvishandiso ndeye multifunction maitiro, iwe unogona kushandura iko kunongedzera kweye tee mubatanidzwa kusarudza mweya waunoda. Maitiro aya anogona kugadzira Vodka, Whisky, Brandy, Rum zvichingodaro.
Chigadzirwa zita: 2000L Vertical Bright Beer Tank BBT, Bright Beer Matangi, cylindrical kumanikidza matangi, anoshandira matangi, doro yekupedzisira ekugadzirisa matangi, matangi ekuchengetera doro - aya ndiwo mazwi akajairika, kusanganisira iyo imwechete kirasi yemidziyo yekumanikidza yakagadzirirwa kugadzirira kabhoni hwahwa usati waiswa mubhodhoro, uchizadza mumakegi kana mimwe midziyo. Yakanatswa kabhoni kabhedhi inosundirwa kubva kune lager matangi matangi kana cylindrically-conical matangi mune yekumanikidza yekuchengetedza doro tangi pasi pekumanikidzwa kumusoro ...
Chiller uye mapaipi
Chiller tsananguro: Chiller muchina unobvisa kupisa kubva pamvura kuburikidza nemhepo-yekumanikidza, Adsorption firiji, kana kufefetera mafiriji macircuit. Mvura iyi inogona kuzotenderedzwa kuburikidza neanopisa kupisa kutonhodza michina, kana imwe nzira yekuyerera (senge mweya kana gadziriso mvura). Sechinodikanwa ne-chigadzirwa, firiji inogadzira kupisa kwemarara iyo inofanirwa kuve inopera kune ambience, kana yehukuru hwekuita, hunowanikwa nekuda kwekudziya. Glycol kutonhora pombi Ful ...
Chando chinwiwa tangi
Chigadzirwa zita: inotonhorera doro tangi Cold inotonhorera doro tangi mudziyo uye inotakura mvura inotonhorera inozoshandiswa kutonhodza chinovava wort kusvika kune inogona kuvirisa tembiricha munda mushure mekuvira. Cold mvura tangi yakajairika dhizaini: 1.Kubudirira vhoriyamu: zvinoenderana ne wort kugona uye yakawanda ye fermenter. 2.Top manhole, girazi pamwero kuratidza. 3.SS element yekutonhora kwemvura. 4.Zvinhu: SUS304. Ukobvu hwomukati: 3mm, ukobvu hwekunze: 2mm. Dombo mvere, ukobvu: 80mm. 5.Inner pamusoro: Pickling uye ...
1000L Distillation Zvishandiso
Iyo michina ndeye multifunction maitiro, iwe unogona kushandura iko kunongedzera kweye tee mubatanidzwa kusarudza mweya waunoda. Maitiro aya anogona kugadzira Vodka, Whisky, Brandy, Rum zvichingodaro.